iflix | Telenor Myanmar
(၁) တယ်လီနောမြန်မာသည် မည်သည့်အမျိုးအစား broadband ဝန်ဆောင်မှုများကို ပေးလျက်ရှိသလဲ?
တယ်လီနောမြန်မာသည် သင့်တင့်မျှတသောစျေးနှုန်း၊ စိုးရိ်မ်ပူပန်မှုကင်းသော၊ အနာဂတ်နည်းပညာများကို အသုံးပြုရန် အသင့်ရှိနေသော broadband ဝန်ဆောင်မှုကို ပေးနေပါသည်။
(၂) မီးပျက်သွားသော အချိ်န်၌လည်း အင်တာနက် အသုံးပြုနိုင်ပါသလား?
Telenor Broadbandတွင် Power Backup Plan ပါဝင်ပြီး၊ ၎င်းသည် အင်တာနက်ကို (၈)နာရီအထိ အသုံးပြုနိုင်အောင် ထောက်ပံ့ပေးပါသည်။ (အိမ်တွင်လျှပ်စစ်မီးရရန် လိုအပ်သော ပစ္စည်းများရှိရမည်မှာ customer၏တာဝန်သာ ဖြစ်ပါသည်။)
(၃) အနာဂတ်နည်းပညာများကို အသုံးပြုရန် အသင့်ရှိသကဲ့သို့ Telenor Broadbandသည် မြင့်မားသောqualityနှင့် ဝန်ဆောင်မှုအတွက် မည်ကဲ့သို့ အာမခံပါသနည်း။
Telenor Broadbandကို (၁)ဂီဂါဘစ်အထိ မြန်နှုန်းပေးနိုင်သော fiberဆက်သွယ်မှုကို တပ်ဆင်ထားမည်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် quality နှင့် မြန်နှုန်းကို Onlineပေါ်တွင် တိုက်ရိုက်ဂိမ်းကစားနိုင်သော၊ TVနှင့် ရုပ်ရှင်များတိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုနိုင်သည်အထိ ပေးနိုင်ကြောင်းအာမခံပါသည်။
(၄) သင်၏ ဖိုက်ဘာအင်တာနက်သည် ကျွနု်ပ်တို့အသုံးပြုနေသော wifiနှင့် ဘယ်လိုမျိုးကွဲပြားခြားနားသလဲ?
အလွန်ကွဲပြားခြားနားပါတယ်၊ တယ်လီနော broadbandသည် သင့်အတွက်သီးသန့်ဖြစ်သော မြန်နှုန်းကိုထိန်းသိမး်ပေးထားသည်၊ ကောင်းမွန်ဆုံးသောမြန်နှုန်းကို ရရှိနိုင်ရန် router/outletမှ ကေဘယ်ကြိုးနှင့်ချိတ်ပြီး အသုံးပြုနို်င်ပါသည်။ သင်၏ကိုယ်ပိုင် wifiမှ userမည်မှျှှအသုံးပြုမည်ကိုလည်း သတ်မှတ်ထားနိုင်ပါသည်။ အကွားအဝေးဝေးကွာမှုသည် အင်တာနက်ကွာလတီအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိသောကြောင့် routerသည်သင်၏အနီးဆုံးနေရာတွင်ရှိနေရန်လည်း အရေးကြီးပါသည်။
မြန်နှုန်း၊ အသုံးပြုမှုနှင့် သက်ဆိုင်သော
(၁) အိမ်သုံးဖိုင်ဘာ အင်တာနက် plan အမျိုုးအစား ဘယ်နှစ်မျိုးရှိပါသနည်း။
Telenor Broadband အိမ်သုံးဖိုင်ဘာ အင်တာနက် plan အမျိုုးအစား (၃)မျိုးရှိပါသည်။ 5Mbps၊ 10Mbps နှင့်15Mbpsတို့ဖြစ်ကြပါသည်။
(၂) အင်တာနက်လိုင်းကဘယ်လိုမျိုးတည်ငြိမ်မှုရှိပါသလဲ၊ 5Mbps ၊ 10Mbps နှင့် 15Mbpsအတွက် user ဘယ်လောက်များများ အသုံးပြုနို်င်ရန် ထောက်ပံ့ပေးထားသလဲ?
အင်တာနက်လိုင်းကအလွန်တည်ငြိမ်မှုရှိပြီး routerဆီသို့ ရောက်ရှိသောမြန်နှုန်းမှာလည်း အမြဲတမ်းတူညီနေပါလိမ့်မည်။ userအများကြီးက routerနှင့်ချိတ်ဆက်ပြီးအင်တာနက်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်၊ သို့ရာတွင် userအများကြီးတပြိုင်နက်အသုံးပြုမှုသည် user တစ်ဦးချင်းစီအတွက် အင်တာနက်အသုံးပြုသည် ့အတွေ့အကြုံအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိလိမ့်မည်။
(၃) ကန့်သတ်မဲ့ အသုံးပြုနိင်သော planမျိုးဟုတ်ပါသလား?
ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒေတာပမာဏအကန့်အသတ်မဲ့ စိတ်ကြိုက်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်၊ သိုု့သော် အင်တာနက်အားအခြားသူများသို့ မျှဝေသုုံးစွဲခြင်း (သို့) ပြန်ရောင်းချခြင်းကို လုံးဝခွင့်မပြုပါ။
(၄) Telenor Broadbandကို အသုံးပြုပြီး မည်သည့်ပမာဏထိ အင်တာနက် အသုံးပြုနိုင်သနည်း?
Telenor Broadbandနှင့်အတူ သင်ရွေးချယ်ထားသော မြန်နှုန်းဖြင့် အင်တာနက်ကို သင်ကြိုက်သလောက် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
Customerများအားလုံး Wifi routerရရှိမည်ဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းနှင့်အတူ mobile ဖြင့်လည်းကောင်း၊ ကွန်ပြူတာ (သို့) အခြားdevice များသို့ ကြိုးဖြင့်ချိတ်ဆက်ကာ အင်တာနက်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
(၅) Users အများကြီး တပြိုင်နက် အသုံးပြုနို်င်ပါသလား?
အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ Telenor Broadband ဝန်ဆောင်မှုများကို မြန်နှုုန်းအမျိုးမျိုးကို စျေးနှုန်းအမျိုးမျိုးဖြင့်ရရှိနိုင်ပါသည်။ ဝန်ဆောင်မှုများအတွက် စျေးနှုန်းအမျိုးမျိုးရှိသော planပေါ်မူတည်ပြီး အသုံးပြုနိုင်သော userအရေအတွက် ကွာခြားလိမ့်မည်။
(၁) 5Mbps ၊ 10Mbps နှင့် 15Mbps planတို့၏ စျေးနှုန်းများမှာ ဘယ်လောက်လဲ?
5Mbps planအတွက် 35,000ကျပ် ၊10Mbps planအတွက် 50,000ကျပ် နှင့် 15Mbpsအတွက် 75,000ကျပ်တို့ဖြစ်ကြပါသည်။
(၂) စျေးနှုန်းသည် အခွန်ထည့်တွက်ပြီးသား ဟုတ်ပါသလား?
(၃) ဝန်ဆောင်မှုအတွက် နှစ်စဉ်ကြေးပေးဆောင်ဖို့ လိုပါသလား?
Telenor Broadband ဝန်ဆောင်မှုများအတွက် နှစ်စဉ်ကြေးပေးဆောင်ရန် မလိုပါ။
(၁) Telenor Broadband ဝန်ဆောင်မှုသည် Prepaid (သို့) Postpaid လား?
ယခုလောလောဆယ်တော့ Telenor Broadbandသည် Prepaid ဝန်ဆောင်မှုဖြစ်ပါသည်။
(၂) အင်တာနက်လိုင်းသည် မည်သည့်အခြေအနေမျိုး၌ ဖြတ်တောက်ခြင်း (သို့) ရပ်ဆိုင်းခြင်း ဖြစ်နိုင်သနည်း။
ဘေလ်ပေးဆောင်ရန် သတ်မှတ်ထားသော နောက်ဆုံးရက်အထိ ပေးဆောင်ခြင်းမရှိပါက၊ လူကြီးမင်း၏အင်တာနက်လိုင်းအား ခေတ္တယာယီဖြတ်တောက်မည်ဖြစ်ပါသည်။ လူကြီးမင်း၏အင်တာနက်လိုင်းအား ခေတ္တယာယီဖြတ်တောက်ခြင်းကာလသည် ၃လအထိကျော်လွန်သွားပါက၊ အင်တာနက်လိုင်းသည် အလိုအလျောက်ရပ်ဆိုင်းသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
(၃) ဝန်ဆောင်မှုကို ဆက်၍အသုံးမပြုဘူးဆိုလျှင် အဆုံးသတ်ခ (termination fee)ပေးဆောင်ရန်လိုပါသလား?
(၄) အဆုံးသတ်ခွင့်မတိုင်ခင် ဝန်ဆောင်မှုကို အနည်းဆုံးဘယ်လောက်အထိ အသုံးပြုနိုင်ပါသလဲ?
ဝန်ဆောင်မှုသည် customerပုံမှန်လစဉ်ကြေးပေးဆောင်သည်အထိ အလုပ်လုပ်မည်ဖြစ်သည်။ သို့သော် customerသည် ဆက်၍ မပေးဆောင်လျှင် ဝန်ဆောင်မှုသည် အလိုအလျောက်ပိတ်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
(၅) တယ်လီနော Broadband customerများအတွက် ဘေလ်ပေးဆောင်ရန် နည်းလမ်းဘယ်နှစ်မျိုး ရှိပါသနည်း။
နည်းလမ်း ၁ - ငွေရှင်းကောင်တာများမှ ငွေပေးခြင်း
နည်းလမ်း ၂ - 1-2-3 service မှတဆင့် ငွေပေးခြင်း
(၆) ဘေလ်ပေးဆောင်ပြီးနောက် လိုင်းပိတ်ထားသော customerများအတွက် အင်တာနက်လိုင်းပြန်ဖွင့်ရန် အချိန်မည်မျှကြာမည်နည်း။
1-2-3 ဝန်ဆောင်မှုဖြင့် ဘေလ်ပေးဆောင်ပါက၊ အင်တာနက်လိုင်းအား ထိုနေ့(၃)နာရီအတွင်း ပြန်ဖွင့်ပါလိမ့်မည်။
Wave Moneyဖြင့် ဘေလ်ပေးဆောင်ပါက၊ အင်တာနက်လိုင်းအား နောက်တစ်နေ့ နေ့လည်(၁)နာရီခန့်တွင် (တနင်္လာမှ ကြာသပတေးနေ့ အတွင်းပေးဆောင်ပါက)(သို့မဟုတ်) နောက်၃ရက်အကြာ နေ့လည်(၁)နာရီခန့်တွင် (သောကြာ၊ စနေ၊ တနင်္ဂနွေနှင့် ရုံးပိတ်ရက်အတွင်းပေးဆောင်ပါက) ပြန်ဖွင့်ပါလိမ့်မည်။
(၁) တပ်ဆင်မှုကို ကျွနု်ပ်၏နေအိမ်၌ ဘယ်အချိန်လောက် စတင်မည်နည်း။
စာရင်းပေးသွင်းထားလျှင် စာရင်းပေးသွင်းချိန်မှစ၍ (၁)လအတွင်း စတင်တပ်ဆင်ပါလိမ့်မည်။ လူကြီးမင်း၏အဆောက်အအုံ၌ Telenor Broadbandရှိပြီးသားဆိုပါက ၁၄ရက်အတွင်း လာရောက်တပ်ဆင်ပေးပါမည်။
(၂) တပ်ဆင်မှုကို အချိန်မည်မျှယူမည်နည်း။
(၃) ကျွန်ုပ်၏အိမ်သည် အရမ်းဟောင်းနေပြီး အိမ်နံရံအား drillဖောက်ခြင်းကို မလုပ်ချင်ပါ။ drillမဖောက်ဘဲ တပ်ဆင်မှုကို လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသလား?
တယ်လီနောသည် သင်၏နေအိ်မ်၌ တတ်နိုင်သမျှအနည်းဆုံးသက်ရောက်မှုသာရှိသည့် တပ်ဆင်မှုမျိုးကို ပြုလုပ်ပေးမှာပါ။ drillမဖောက်ရဘူးဆိုလျှင် ဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြုနိုင်ရန် အခြားနည်းလမ်းတစ်ခုကို ကြီုးစားရှာဖွေ၍ တပ်ဆင်ပေးပါမည်။
(၁) ပိုင်ရှင်အမည်ပေါက်ပြောင်းလဲလိုပါက မည်သို့ပြုလုပ်ရမည်နည်း။
တယ်လီနော Broadband call center - ၀၉၇၉၇၉၉၈၈၈၈ အားခေါ်ယူပြီး မှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက် သုံးစွဲသူအမည်ပြောင်းလဲလိုကြောင်း အကြောင်းကြားပါ။
လူကြီးမင်း၏ အီးမေးလ်လိပ်စာအား ပေးပါ။
တယ်လီနော Broadbandမှ သုံးစွဲသူ၏သဘောတူညီမှုပုံစံ (CAF - Customer Acceptance Form)နှင့် တပ်ဆင်ခြင်းသဘောတူညီမှုစာချုပ်အား အီးမေးလ်မှတဆင့် ပေးပို့မည်ဖြစ်ပါသည်။
သုံးစွဲသူ၏သဘောတူညီမှုပုံစံနှင့် တပ်ဆင်ခြင်းသဘောတူညီမှုစာချုပ်တွင် မှတ်ပုံတင်လိုသောအမည်အသစ်ဖြင့် ဖြည့်သွင်းပြီး နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်မိတ္တူ (သို့) နိုင်ငံကူးလက်မှတ်မိတ္တူဖြင့် တယ်လီနော Broadbandသို့ ပေးပို့ပါ။
(၂) ​ကျွန်ုပ်အိမ်ပြောင်းမည်ဆိုလျှင် ဘာဖြစ်နိုင်သနည်း။ အခြားနေရာသစ်၌ သင်၏broadbandဝန်ဆောင်မှုကို ဆက်အသုံးပြုနု်ိင်ပါသလား?
သင်၏အိမ်(သို့)တိုက်ခန်းသို့ သီးသန့်တပ်ဆင်ထားသော အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုဖြစ်သောကြောင့် ရွေ့ပြောင်းယူဆောင်သွားရန် မဖြစ်နိုင်ပါ။ သင်ရွေ့ပြောင်းသောနေရာသစ်သည် တယ်လီနောမှ သီးသန့်တပ်ဆင်ထားသော အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုကို ယူထားပြီးသားဆိုလျှင် ၎င်းမှတစ်ဆင့် သင်သည် အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုကို ဆက်ပြီးအသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
(၃) အကယ်၍ အင်တာနက်ချွတ်ယွင်းမှုအချိန်ကြာလျှင် နစ်နာမှုအားပြန်လည်လျော်ပေးရန်ရှိပါသလား?
အချိန်ကြာမြင့်စွာ အင်တာနက်ချွတ်ယွင်းလျှင် customer များအတွက ်ဘာပြန်လုပ်ပေးမည်နည်း? "အကယ်၍ အင်တာနက်ချွတ်ယွင်းမှုကြာချိန်သည် (၁)ပတ်ထက်ကျော်လွန်သွားလျှင် customer ၏နစ်နာမှုအား အလျော်ပြန်ပေးရန် အစီအစဉ်ရှိပါသည်။
(၄) တယ်လီနော Broadband Call Centerအား ဘယ်အချိန်ထိ ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသလဲ?
တယ်လီနော Broadband Call Center အား နေ့စဉ် မနက် (၇)နာရီမှ ညနေ (၈)နာရီအထိ ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။